Amakhathalogi weFischer-Tropsch athuthukisiwe nge-Sonication - Hielscher Ultrasound Technology
I-Synthesis eyenziwe ngcono kwe-Fischer-Tropsch Catalysts ene-Ultrasound: Ukwelashwa kwe-Ultrasonic kwezinhlayiya ezinamandla kusetshenziselwa izinhloso eziningi. I-Ultrasonic synthesis isiza ukudala izinhlayiya ze-nano-modified noma ezisebenzayo, ezinomsebenzi omkhulu wokuqinisa. Ama-catalysts asetshenzisiwe futhi anobuthi angalulama kalula futhi ngokushesha asetshenziswe ukwelashwa komhlaba ongaphezulu, okususa ukufudusa ukufakazela amandla kokuthonya. Ekugcineni, ukususwa kwe-ultrasonic deagglomeration kanye nokuhlakazeka kubangela ukufana, ukusatshalaliswa kokusakazwa kwezinhlayiya eziyisiyaluyalu ukuze kuqinisekiswe indawo ephezulu yokusebenziseka komhlaba nokudluliselwa kwenqwaba ngokuguqulwa okukhulu kwenhliziyo.
Imiphumela ye-Ultrasonic kuCatalyst
I-Ultra enamandla amakhulu yaziwa kakhulu ngethonya layo elihle ekuphendukeni kwamakhemikhali. Lapho kukhiqizwa amagagasi amakhulu e-ultrasound ibe yi-hydrate ephakathi nendawo ye-acoustic. I-Ultrasonic cavitation ikhiqiza izimo zasendaweni ezedlulele ngamazinga okushisa aphakeme kakhulu afinyelela ku-5,000K, izingcindezi ze-approx. Ama-2000atm, namajethi koketshezi afinyelela ku-280m / s velocity. Isimo se-acoustic cavitation kanye nemiphumela yaso ezinqubweni zamakhemikhali yaziwa ngaphansi kwegama elithi sonochemistry.
Ukusetshenziswa okujwayelekile kwe-ultrasonics ukulungiswa kwezindawo ezinamandla kakhulu: amandla e-ultrasound cavization enza kusebenze indawo yomthangalisi njengoba ukuguguleka kwe-cavitational kukhiqiza indawo engafinyeleleki, esebenzayo kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ukudluliselwa ngobuningi kuthuthukiswa kakhulu ngokusakazeka kweziyaluyalu. Ukushayisana kwezinhlayiyana okuphezulu okubangelwa ukuqubuka kwe-acoustic kususa ukugoqeka kwe-oksijeni yangaphandle yezinhlayiya ze-powder okuholela ekuvuseleleni kabusha komzimba obanga amandla.
Ukulungiswa kwe-Ultrasonic kwe-Fischer-Tropsch Catalysts
Inqubo yeFischer-Tropsch iqukethe ukusabela kwamakhemikhali okuguqula ingxube ye-carbon monoxide ne-hydrogen ibe yi-hydrocarbons eyi-liquid. Ngokuhlanganiswa kwe-Fischer-Tropsch, ama-catalysts ahlukahlukene, kepha asetshenziswa kaningi yi-cobalt iron, iron, ne-ruthenium yenguquko. Ukushisa okuphezulu kwe-Fischer-Tropsch synthet kusetshenziswa ngensimbi yensimbi.
Njengoba amakhathalogi e-Fischer-Tropsch ethambekele ekufakweni kobuthi ngokufakwa ngamakhompiyutha aqukethe isibabule, ukuvuselelwa kwe-ultrasonic kubaluleke kakhulu ukuze kulondolozwe umsebenzi wokuqinisa nokukhetha okugcwele.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Catalyst Synthesis
Izimbotshana noma i-crystallization
(Nano-) Izinhlayiyana ezinobukhulu obulawulwa kahle nesimo
Izakhiwo ezingaphezulu eziguquliwe nezisebenzayo
I-syntnt of of doped noma core-shell izinhlayiya
Ukuhleleka okuhle kakhulu
I-Ultrasonic Synthesis ye-Core-Shell Catalysts
Ama-nanoreartility ama-core-igobolondo yi-nanoparticles ebiyelwe futhi evikelwe igobolondo elingaphandle elihlukanisa ama-nanoparticles futhi livimbele ukufuduka kwawo kanye nokuqina ngesikhathi sokushukuma okunamandla
UPirola et al. (2010) balungiselele ukwengeza izisekeli ezinsimbi ezisekela insimbi esetshenziswa yi-Fischer-Tropsch ngokulayisha okuphezulu kwensimbi esebenzayo. Ocwaningweni lwabo kukhonjiswa ukuthi ukufakwa kwezimpawu zokusizwa kwe-silica kuthuthukisa ukuthuthukiswa kwesimbi futhi kwandisa umsebenzi wokuqinisa. Imiphumela ye-Fischer-Tropsch synthesis iveze ama-catalysts alungiselelwe yi-ultrasonication njengokusebenza kahle kakhulu, ikakhulukazi lapho kwenziwa impregnation ye-ultrasonic kumvelo we-argon.
I-UIP2000hdT – I-2kW enamandla i-ultrasonicator ukuphatha izinhlayiya ze-nano-.
I-Ultrasonic Catalyst Reactivation
Ukwelashwa kwesizinda se-Ultrasonic kuyindlela esheshayo futhi esebenzayo yokuvuselela kabusha uphinde usebenze kabusha ama-catalysts asetshenzisiwe futhi anobuthi. Ukuvuselelwa kabusha kwencwadi yokubamba iqhaza kuvumela ukwenziwa kabusha kwayo futhi iphinde isetshenziswe futhi ngaleyo ndlela igxathu nenqubo yezomnotho neinobungani bemvelo.
Ukwelashwa kwezinhlayiyana ze-Ultrasonic kususa i-inactivating fouling nokungcola kusuka kuzinhlayiya ezinamandla, ezivimba amasayithi okuphendula okubuthakathaka. Ukwelashwa kwe-ultrasonic kunikeza inhlayiya ebabayo ukugeza kwe-jet engaphezulu, ngaleyo ndlela isuse imali esizeni esisebenza ngamandla. Ngemuva kwe-ultrasonication, umsebenzi wokuvuselela ubuyiselwa ekusebenzeni okufanayo nokuvuselela okusha. Ngaphezu kwalokho, i-sonication ihlephula ama-agglomerates futhi inikeze ukusatshalaliswa okungatheni, kwezinhlayiya ezihlakazekile, ezandisa indawo yangaphezulu kwenhlabathi futhi ngaleyo ndlela isayithi elisebenzayo lokuvuselela. Ngakho-ke, ukuvuselelwa kokuvuselela okuvuselela amandla we-ultrasonic kumakhathoni okwenziwa kabusha nendawo ephezulu yokusebenza kwendawo yokudlulisa ngobuningi.
Ukuvuselelwa kabusha kwe-Ultrasonic okuvuselela kusebenza kwezinhlayiya zamaminerali nezinsimbi, (khulu-) izinhlayiya zobumba nama-nanocomposites.
I-High Performance Ultrasonic Systems ye-Sonochemistry
Sicela usebenzise ifomu elingezansi ukucela ulwazi olungeziwe mayelana nokuqamba kwe-ultrasonic nokubuyiselwa kwama-catalysts. Sizokujabulela ukuxoxa ngenqubo yakho nawe futhi sikunikeze uhlelo lwe-ultrasonic oluhlangabezana nezidingo zakho!
Izicelo ze-Fischer-Tropsch Catalysts
I-Fischer-Tropsch synthesis iyisigaba sezinqubo ezinamandla ezisetshenziswa ekukhiqizweni kwamafutha namakhemikhali avela kugesi eyakhiwe (ingxube ye-CO ne-H2), okungaba
okususelwa kugesi yemvelo, amalahle, noma i-biomass inqubo ye-Fischer-Tropsch, isisetshenziswa soguquko olunensimbi esetshenziselwa ukukhiqiza ama-hydrocarbon kusuka kuzinto eziyisisekelo zokuqala i-hydrogen ne-carbon monoxide, engasuselwa ezinsizakalweni eziqukethe i-carbon ezinjengamalahle , igesi yemvelo, i-biomass, ngisho nemfucuza.